Gamuchira mameseji eSMS uye eSMS Verification Makodhi Pamhepo
Kopa imwe yenhamba dzefoni yedu uye tishandise kugamuchira online mameseji uye makodhi ekuzivisa kuburikidza neSMS.
Kuvandudza kuvanzika kwako uchishandisa nhamba dzedu dzefoni. Viga chako chitupa online uchishandisa nhamba dzedu dzenhare kugamuchira mameseji eSMS uye makadhi eSMS ekuzivisa, ese ari online. Hapana kunyoreswa kunodiwa. Mabasa edu akasununguka chose.
Nhamba dzedu dzese dzenhare ndedzechokwadi, dzemuSIM kadi. Naizvozvo, tine chokwadi chekuti mameseji anosvika kune anotigamuchira nekukurumidza mumasekondi mashoma uye nekuvimbika.
Mharidzo dzinogamuchirwa needu akanyanya-kushanda SMS Gateways. Isu hatimiriri manhamba efoni kubva kune mamwe masayiti, nhamba dzedu dzenhare ndedzekutanga uye ndezvedu chete kumasevhisi edu.
Nhamba dzenharembozha medu unogona kugamuchira mameseji eSMS pamhepo uye zvakare maSMS ekuzivisa makodhi kubva kumasevhisi akadai saFacebook, Paypal, Twitter, Instagram nevamwe. Shandisa nhamba dzenharembozha yedu uine chivimbo, ivo havana zuva rekubuda, saka ivo vanozove vari chero iwe paunoda ivo.